Cajiib:– Lamaane Kenyan Ah Oo Arooskoodii Hore Ku Baxay 1 Doolar Ayaa Xalfad Qaali Ah Loo Dhigay + Sawiro | Saxil News Network
Cajiib:– Lamaane Kenyan Ah Oo Arooskoodii Hore Ku Baxay 1 Doolar Ayaa Xalfad Qaali Ah Loo Dhigay + Sawiro
February 15, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Nayrobi (Saxilnews) Lamaane Kenyan ah oo kharashka arooskoodu ku kacay hal doolar ayaa xalfad qaali ah loo dhigay mar kale maalinta Jacaylka Adduunka, iyadoo ay hawshaas soo abaabuleen dad samofaleyaal ah.
In kharashka arooskooda ku kacay uu ahaa hal doolar ayaa aad caan u noqotay iyadoo baraha bulshada la iskula wadaagay dad badan oo Kenyan ahna ay sheegeen in ay caawin doonaan.
Arooskii koobaad ee Wilson iyo Ann Mutura waxay qabeen jiinis, funaanado iyo labo faraanti oo macdan ka samaysan.
Warbaahinta Kenya ayaase kharashka xaflada labaad ee arooskooda ku tilmaamay 35,000 oo doolar, taas oo ka dhacday magaalada Nairobi.
Weriyaha BBC Peter Mwai oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in inkastoo ay si rasmi ah horay isu nikaaxsadeen haddana ay faraanti isu xireen markii ay socotay xafladdan loogu beegay maalinta Jacaylka.
Weriyuhu wuxuu sheegay in dadka Kenya-ka ah qaarkood ay su’aalo ka keeneen kharashka xalfadda iyaga oo Online adeegsanaya ayayna su’aal galiyeen sababta ay dadka soo abaabulay xafladan waxaas oo lacag ah ugu adeegsadeen badalkii ay wax kale ugu qaban lahaayeen kharasha intaas la eg.
Jacayl dhexmaray gabadh Ciraaqiyad ah oo qaxooti ah iyo askari reer Mecadonia ah
Gabadh caddaan ah oo loo dayriyay inay nin madaw ah jeclaatay
Laakiin Aaltonen Jumba, oo ka tirsan shirkadda Slique Events Planner Ltd oo ka mid ah dadkii kaalinta wayn ku lahaa abaabulka xalfadan ayaa BBC-da u sheegay in dad badan oo Kenyan ah ay waxyaabo badan u qabteen lamaanaha oo xataa la siiyay beer casri ah iyo waxyaaabo badan oo kala qiimo ah ayna u baahnaayeen xalfaddan oo kale.
Xigasho:– BBC Somali.com